GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French German Greek Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swedish Tagalog Thai Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
PỌL onyeozi degaara Ndị Kraịst biri n’ọkara ikpeazụ nke narị afọ mbụ Oge Anyị akwụkwọ ozi, sị: “Nọrọnụ na nche.” Gịnị ka ọ na-adọ ha aka ná ntị maka ya? O kwuru, sị: “Ma eleghị anya, a pụrụ inwe onye ga-eburu unu dị ka anụ oriri ya site na nkà ihe ọmụma na aghụghọ efu, dị ka ọdịnala mmadụ si dị.”—Ndị Kọlọsi 2:8.
N’agbanyeghị ịdọ aka ná ntị Pọl, malite n’ọkara narị afọ nke abụọ Oge Anyị, ụfọdụ Ndị Kraịst malitere iji echiche nkà ihe ọmụma oge ochie na-akọwa ihe ndị ha kweere. N’ihi gịnị? Ha chọrọ ka ha na ndị gụrụ akwụkwọ n’Alaeze Ukwu Rom dịrị ná mma ma si otú ahụ tọghatakwuo ndị mmadụ.
Justin Martyr, bụ́ otu n’ime Ndị Kraịst ahụ a kacha mara amara, kweere na Ọnụ Na-ekwuru Chineke eburula ụzọ gosi ndị ọkà ihe ọmụma Gris onwe ya ogologo oge tupu Jizọs abịa n’ụwa. Justin na ndị nkụzi echiche ya na ha yiri kwuru na mwebata e webatara nkà ihe ọmụma na echiche ụgha n’Iso Ụzọ Kraịst so mee ka okpukpe a zuo ụwa ọnụ.
Ụdị Iso Ụzọ Kraịst ahụ Justin Martyr soro tọghatara nnọọ ọtụtụ mmadụ. Ma, mwebata e webatara otu echiche ụgha mere ka e nwekwuo echiche ụgha ndị ọzọ, bụ́kwanụ ebe e si nweta ihe ọtụtụ ndị weere ugbu a dị ka ozizi Ndị Kraịst. Iji gbaa echiche ụgha ndị ahụ n’anwụ, ka anyị jiri ihe akwụkwọ ndị e ji eme nnyocha, bụ́ ndị anyị ga-atụle ugbu a, kwuru tụnyere ihe Baịbụl na-akụzi n’ezie.